Nzira yekufara sei usina Kuroora ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kufara sei uri Single. Bhaibheri rinotidzidzisa kudaro Nakidzwa nechikamu chega chega chehupenyu hwedu tisingafungi nezve chimwe chinangwa. Pedro akanga akaroora uye Paulo akanga asina kuroora, asi vose vakararama upenyu hwoumbozha uye vakabetsera zvikuru mukukura kwechechi. Kunyange usina murume kana mudzimai, unogona kuva noupenyu hwakanaka uye hunogutsa.
Kana uchigara wega, chinhu chekutanga chaunofanira kuziva ndechekuti kuroora hakupedzi matambudziko ako ese. Every situation ine ups and downs kwayo. Kuroorwa haisi ngano, zvine matambudziko ako. Uye kugara uri woga hakurevi kusurukirwa kana kusuruvara. Bhaibheri rinoratidza kuti ungararama sei uchifara usina kuroorwa:
Asi kana wawana, hautadzi; uye kana musikana awanikwa, haana kutadza; asi vakadaro vachava nedambudziko renyama, uye ini ndinoda kunzvenga iyo nokuda kwenyu.
1 Ungave sei nemufaro usina Kuroora maererano neBhaibheri
1.1 1. Rarama nokuda kwaMwari
1.2 2. Koshesa ushamwari hwako
1.3 3. Batsira vamwe vanhu
Ungave sei nemufaro usina Kuroora maererano neBhaibheri
Kufara sei maererano neBhaibheri danho nedanho
1. Rarama nokuda kwaMwari
Pane munhu mumwe chete anogona kukupedzisa: Jesu. Hapana munhu anoyambuka nzira yako anogona kuzadza chisipo chiri mumoyo mako. Jesu ega ndiye anogona kuita izvi. Enda kuna Jesu umupe hupenyu hwako. Ipapo iwe uchawana zvinoreva uye chinangwa chehupenyu hwako. Hauzombovi wega, nekuti Jesu achagara anewe.
Chero uri wega unogona kupira nguva yakawanda kuzvinhu zvaMwari. Naizvozvo, farikanya rusununguko rwokusafanira kutarisira mhuri kuti idzidze zvakawanda pamusoro peShoko raMwari uye kuva anobatanidzwa zvikuru muchechi.
"Ndinoshuva, zvino, kuti dai musina kuchema. Munhu asina kuroora anotarisira zvinhu zvaShe, nezvokufadza kwaShe.”
1 VaKorinte 7:32
Ziva mufaro wekurumbidza Mwari. Wana nguva yekuongorora upenyu hwako uye kuwiriranisa mafungiro ako nemafungiro ako nezvinodiwa naMwari.
Farikana kwazvo muna Jehovha, Iye agokupa zvinodikamwa nomoyo wako.
Pisarema 37: 4
Kutora nguva yekudzika hukama hwako naMwari chikomborero chikuru. Usapotsa mukana we swederai pedyo naMwari. Neiyi nzira, kusaroora kunogona kukubatsira nenzira yakanaka muupenyu hwako.
2. Koshesa ushamwari hwako
Kugara uri woga hazvirevi kugara uri woga kubva kune dzimwe nyika. Hushamwari hunopenya hupenyu uye hunounza maonero matsva nemikana. Tese tinoda kushamwaridzana uye rudo, saka ibva pamba uye upedze nguva neshamwari.
Vaviri vanopfuura mumwe; nokuti vane mubayiro uri nani pakubata kwavo. Nokuti kana vakawira pasi, mumwe achasimudza shamwari yake; asi o solo! kuti painodonha, hapazovi nesekondi yekuisimudza.
Muparidzi 4: 9-10
Kana uchienda kuchechi uchakwanisa kuita shamwari dzechiKristu dzinozova a simba rakanaka muhupenyu hwako. Chechi inzvimbo yakanaka zvakare sangana nevanhu vakasiyana newe, nezviitiko zvakasiyana-siyana uye zvinogona kukudzidzisa zvakawanda. Nenzira iyoyo unogona kukura uye kukurudzirwa wehama dzako dzechiKristu.
“kwete nokurega kuungana, setsika ine vamwe, asi nokurayira; uye zvikuru kwazvo, kana muchiona kuti zuva iro roswedera.
3. Batsira vamwe vanhu
Jesu akataura izvozvo kune mufaro mukuru pakupa kupfuura pakugamuchira. Naizvozvo, imwe nzira yokushandisa nayo nguva yako kuva usina kuroorwa ndeyokuitsaurira kubetsera vamwe. Unogona kuropafadza muvakidzani, shamwari, hama, waunoshanda naye kana imwe sangano. The best option is kupararira rudo rwaMwari kuti ufare.
Pazvinhu zvose ndakakudzidzisai kuti, nokushanda saizvozvi, munofanira kubatsira vanoshayiwa, uye murangarire mashoko aShe Jesu, akati: Kwakaropafadzwa kupa kupfuura kugamuchira.
Muvengi mukuru werufaro udyire. Batsira vamwe wedzera mufaro uye kukubatsira kurarama nekutsunga, pasina kutarisa mamiriro ako pachako chete. Rudo rwechiKristu runogona kupiwa munhu wose, kwete mhuri chete.
Kugara wega hakufanire kuve kwakashata kana chiitiko chekuzviparadzanisa nevamwe. Unogona kushandisa nguva ino swedera pedyo naMwari uye nevanhu vakakupoteredza.
Tinovimba kuti chinyorwa ichi chinokubatsira kuziva kuti ufare sei uri single. Isu tinovimbisa kuti, kana iwe ukaisa aya matipi matatu mukuita, iwe unowana mamiriro emufaro akasiyana zvakanyanya kubva pane zvawajaira. Kana iwe zvino uchida kudzidza zvimwe zvinyorwa zvebhaibheri, tinokurudzira kuti udzidze areka yaNoa yakanga yakaita sei.